कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा कोइराला परिवारबाट उम्मेदवारी दिइने : महामन्त्री कोइराला
रुपन्देही, ७ असोज । कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा कोइराला परिवारबाट उम्मेद्वारी पर्ने बताएका छन् ।
सर्लाही, ७ असोज । पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार शनिबारदेखि शैक्षिक माफियाहरु विरुद्ध अनिश्चितकालीन रिले अनसन थालिएको छ ।
प्रेस जगतको महत्वपूर्ण योगदान : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन र रक्षाका लागि प्रेस जगतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएकी छन् । नेपाली पत्रकारिता र प्रेस जगतले लोकतन्त्रको पक्षपोषणमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतद्वारा भारइलफ्लु प्रभावितको स्थलगत निरीक्षण
सप्तरी, ६ असोज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सप्तरीको कञ्चनपुरमा फैलिएको भाइरल फ्लुबारे स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् ।
संशोधनबिना संविधान स्वीकार्य हुँदैन : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, ५ असोज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले संशोधन विना संविधान स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
शहीद परिवारलाई दुधालु पशु दिइने : राज्यमन्त्री यादव
रौतहट, ४ भाद्र । केन्द्रीय सरकारको कमाण्डबाट प्रादेशिक सरकारको मातहतमा आएका परिवर्तित जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको एक कार्यक्रमबीच बिहीबार उद्घाटन गरिएको छ ।
‘मधेशले अलग राष्ट्रको माग गर्न सक्छ’
वीरगञ्ज, ४ असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले मधेशप्रति सरकारको अझै पनि विभेदकारी नीति रहेको आरोप लगाएका छन् ।
विभेदकारी संविधान स्वीकार हुँदैन : राज्यमन्त्री मण्डल
रौतहट, ३ असोज । रौतहटको सदरमुकाम गौरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै काला दिवस मनाएका छन् ।
तमरा अभियानका कार्यकर्ताले जलाए संविधान
रौतहट, ३ असोज । तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका नेता कार्यकर्ताहरुले मधेश विरोधी संविधान भएको भन्दै सदरमुकाम गौरस्थित मधेशी क्रान्ति चौकमा नेपालको संविधान २०७२ लाई जलाएका छन् ।
मधेशी तथा आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायीहरुले भने, ‘कुहिएको संविधान छिट्टै रद्दीको टोकडीमा जान्छ’
काठमाडौं, ३ असोज । मधेशी तथा आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी संघ (मिला)ले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाएको छ ।
जनकपुरधाम, ३ असोज । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको आह्वान हजारौं सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएका छन् । उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन आह्वान गरेका थिए ।
तौलिहवामा राजपा नेपालद्वारा कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन
कपिलवस्तु, ३ असोज । कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहवामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले कालो दिनको रुपमा कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारी कार्यालय तथा बजारहरुमा राजपाले झुण्ड्यायो कालो झण्डा
सप्तरी, ३ असोज । संविधान दिवसको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत सप्तरीका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा बजारहरुमा कालो झण्डा झुण्ड्याएको छ ।
मधेशवादका प्रणेतालाई ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’, ४२१ मा ३२ मधेशी (तालिकासहित)
काठमाडौं, ३ असोज । मधेशमा केही राजनीतिक दलले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाइरहँदा नेपाल सरकारले मधेशवादका प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहलाई विभूषित गर्ने भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा हामी संविधान दिवस मनाउन सक्दैनौं : महतो
कैलाली, ३ असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलीय नेता राजेन्द्र महतोले यो संविधानमाथिको विरोध जारी रहने बताएका छन् ।
विद्यार्थी फोरमको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न
राकेश यादव, रौतहट, ३ असोज । संघीय समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटको प्रथम जिल्ला अधिवेशन सदरमुकाम गौरमा मंगलवार सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय सदस्य रेवन्त झाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न
संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएकोले कालो दिवस मनाउँदैनौं : उपप्रधानमन्त्री यादव
राजविराज, २ असोज । उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफूहरुले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएकोले कालो दिवस नमनाउने बताएका छन् ।
साधु सन्त बन्न राजनीति गरेको होइन : महतो
बाँके, २ असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलीय नेता राजेन्द्र महतोले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु कुनै अपराध नरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष साह विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
रौतहट, १ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका निर्वा्चित अध्यक्ष रविन्द्र साहका विरुद्धमा सोमबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांगे्रस एक भएर लाग्नु पर्ने : आचार्य
कपिलवस्तु, १ असोज । पूर्वसिचाई राज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले लोकतन्त्रको रक्षाकालागि बर्तमान अवस्थामा कांग्रेस एकबद्ध हुनु पर्ने बताएका छन् ।
फोरमले पनि संविधान दिवसको विरोधमा ब्ल्याक आउट गर्ने (विज्ञप्तिसहित)
जनकपुरधाम, १ असोज । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि संविधान दिवसको विरोधमा ब्ल्याक आउट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रुपन्देहीबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका दुई जना पक्राउ
रुपन्देही, ३१ भाद्र । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका दुई जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
राजपा रौतहटले ३ गते कालो दिवस मनाउने
राकेश यादव, ३१ भाद्र । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटले आसोज ३ गते बृहद विरोध प्रदर्शन र ब्लायक आउट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुदूर पश्चिमलाई सुन्दर र विकसित बनाउनु पर्दछ : प्रम ओली
काठमाडौं, ३१ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदुरपश्चिमलाई सुन्दर र विकसित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सातौं विश्वविद्यालयसभाको बालुवाटारमा उद्ध्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताए ।